भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौंमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासकालागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिमस्टेक ) को दुईदिने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
भारतीय राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजको विशेष उडान मार्फत मोदी काठमाडौं आएका हुन्। उनी बिहीबार बिहान करिव साढे ८ बजे आइपुगेका हुन्। उनको अवतरण तालिका भने सवा ८ बजे तय गरिएको थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा नेपालका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गरेका थिए।
मोदीलाई नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारतका साथ स्वागत गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीलाई शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रमुख भरतकुमार रेग्मीले स्वागत गरेका थिए।
मोदी विमानस्थलबाट सोझै सम्मेलनस्थल सोल्टी होटल जाने कार्यक्रम छ। उनले केही समय सोल्टीको स्विट रुममा आराम गरेपछि सम्मेलनमा भाग लिनेछन्।
तस्बिरहरुः अंगद ढकाल
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:२७
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल: चिकित्सक नहुँदा उपचार प्रभावित
चिकित्सक अभावले दैनिक जाँच हुने बिरामीको कोटा तोक्नुपर्ने बाध्यता छ भने जनशक्ति अभावमा आईसीयू सञ्चालन हुन सकेको छैन
भाद्र १४, २०७५ दुर्गालाल केसी
दाङ — राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराहीमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ । १ सय २१ जनाको दरबन्दी भएकामा ७९ जनाको मात्रै पूर्ति भएको छ । ४२ स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त छ ।
दाङको घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल । तस्बिर : दुर्गालाल
चिकित्सक नभएका कारण उपचारमा समस्या भएको छ । आएका सबै बिरामीको उपचार गर्न कठिनाइ भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य सेवा बढाउन माग गर्दै नागरिक समाजले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी नभएका कारण बिरामीहरू उपचार नगरी फर्कन बाध्य भइरहेको प्रति समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अस्पतालको अवलोकन, निरीक्षण गर्दा चिन्ताजनक देखिएको समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए । उपक्षेत्रीय अस्पतालसरहका कुनै पनि सुविधा नभएका कारण प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नभएको उनले गुनासो गरे ।
विशेषज्ञ चिकित्सक २० जनाको दरबन्दी भएकोमा ९ जना मात्रै छन् । ११ विशेषज्ञको अभाव छ । मेडिकल अधिकृत १८ जनामा ६, नर्सिङ स्टाफ ३५ मा ३४ र अन्य ४८ मा ३० जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । न्युरोलोजिस्ट, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, न्युरोसर्जन, डेन्टल सर्जन, प्याथोलोजिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलोजिस्ट र युरोसर्जनको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले बताए ।
प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) र मेडिकल जनरलिस्ट काजमा वीर अस्पतालमा छन् । लामो समयदेखि अस्पतालमा प्रमुख मेसु नै आएका छैनन् । निमित्तकै भरमा अस्पताल चलेको छ । नवौं तथा दसौं तहका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक, आठौं तहका डेन्टल सर्जन, सातौं तथा आठौं तहका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट र सातौं तथा आठौं तहका फार्मेसी अधिकृतको पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
जनशक्ति अभावका कारण कतिपय सेवामा दिनमा ४० भन्दा बढी बिरामी जाँच गर्न नसकिने सीमा कायम गरिएको छ ।
‘चिकित्सक नभएपछि एक जनाले मात्रै कतिसम्म काम गर्न सक्छ ? चिकित्सक पनि मान्छे नै हो, आराम चाहिन्छ । सेवामा गुणस्तर पनि दिनुपर्‍यो,’ डा. पन्थीले भने, ‘बाध्य भएर चिकित्सक कम भएको सेवामा दैनिक जाँच गर्न सकिने संख्या तोक्नु परेको हो । जनशक्ति थप भए सबै बिरामीलाई उपचार गर्न सकिन्छ ।’
अस्पतालमा ११ औं तहका चिकित्सकको दरबन्दी नहुँदा पनि विशेषज्ञलाई टिकाउन समस्या भएको छ । ११ औं तहको प्रमुख मेसु पदको मात्रै दरबन्दी छ । अस्पतालमा काम गर्दागर्दै ११ औं तहमा बढुवा हुनेले मेसु नपाउने र पद पाएका अस्पतालमै नआउने प्रवृत्तिले समस्या बढाइरहेको छ ।
धेरै योग्य चिकित्सक दरबन्दी नभएकै कारण बढुवापछि सरुवा हुनुपरेको डा. पन्थीले बताए । ०७१ मा १ सय शय्याको स्तरोन्नति भए पनि जनशक्ति भने थप नभएको उनको गुनासो छ । ‘अस्पतालको स्तर वृद्धि भयो तर जनशक्ति ५० शय्याकै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’
राप्तीका पहाडी जिल्लाका साथै अर्घाखाँचीबाट समेत यहाँ बिरामी आउने गरेका छन् । करिब २३ लाख जनसंख्या यस अस्पतालमा निर्भर रहेको डा. पन्थीले बताए । दैनिक चार सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । एक वर्षमा यस अस्पतालले ८० हजार ६० बिरामीको उपचार गरेको छ ।
आपतकालीन बिरामी ३४ हजार २९, सुत्केरी ४ हजार ६ सय १७, मुख्य शल्यक्रिया १ हजार ३ सय ४१, मध्यम खालका २ हजार ८१ र सामान्य खालका २ हजार ८१ जनाको शल्यक्रिया भएको अस्पताल रेकर्डले देखाउँछ । दाङमा थारू समुदायमा मात्रै रहेको सिकलसेल रोगका बिरामी पनि त्यत्तिकै आउने गरेका छन् ।
वर्षमा १ सय ४२ सिकलसेलका बिरामी अस्पताल आएका थिए । ‘उपलब्ध स्रोत साधनबाट पनि रिफर संख्या घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ पन्थीले भने, ‘गत वर्ष ४ सय ८६ बिरामी रिफर भएकामा यस वर्ष २ सय ५७ मात्रै रिफर भए ।’
आईसीयू नभएका कारण बिरामी रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । सबै प्रविधि तयार भइसक्दा पनि जनशक्ति अभावमा आईसीयू सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । ‘जनशक्ति नभएपछि कसरी काम गर्नु ? सबै उपकरण त्यत्तिकै थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘आईसीयूका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्न खोज्दा रोकियो । अहिले बनाएका संरचना पनि अलपत्र छन् ।’
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको तयारी रोकिदिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । न त प्रतिष्ठानले गति लिन सकेको छ, न अस्पताल आफैंले काम गर्न पाएको छ । प्रतिष्ठानले स्पष्ट रूपमा काम गर्न नसक्दा पनि अस्पतालमा समस्या भएको छ । ‘भर्खर जन्मेका शिशुलाई केही समस्या हुनेबित्तिकै आईसीयू नभएका कारण रिफर गर्नुपर्छ । सर्पले डसेका र बढी प्रविधि चाहिने सेवामा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डा. पन्थीले भने, ‘आईसीयू चलाउन धेरै प्रयास गरें तर कतैबाट पनि सहयोग भएन ।’
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:२६